विश्वकपका सात यस्ता रेकर्डहरू जुन टुट्न असम्भव प्राय छन ! – onlinekhelkhabar.com
सनिश आजाद	Posted on १५ जेष्ठ,२०७६
जेठ १५ , सनिश आजाद (अनलाईन खेलखबर )।। अन्तराष्टिय क्रिकेट परिषद ( आईसीसी )को आयोजनामा हरेक चार वर्षमा एक पटक आयोजित हुने विश्वकपलाई क्रिकेटको महा-कुम्भमेला पनि भनिने गरिन्छ ।
सन १९७५ ईङ्गल्याण्डमा पहिलो पटक आयोजना भएको विश्वकप अहिले सम्म ११ पटक १५ बिभिन्न देशमा भब्य र सभ्यका साथ सम्पन्न भईसकेको छ। एकदिवसीय विश्वकपको १२ औ सस्करण मे ३० अर्थात बिहिवार देखि जुलाई १४ सम्म ईङ्गल्याण्ड र वेल्समा हुन् गईरहेको छ ।
विश्वकप खेलाडिका लागि उत्कृष्ट प्रतिभा देखाउने उच्च माध्यम समेत बन्ने गर्छ । हरेक खेलाडीहरुलाई विश्वकप खेल्ने सपना रहेकै हुन्छ । चर्चित तथा महान खेलाडीहरुका लागी विश्वकप आफैमा खास र महत्वपुर्ण रहने गर्छ ।
त्यसैले त हरेक विश्वकपमा नया अद्वितीय किर्तिमान बन्ने गर्छन । विश्वकपका किर्तिमान पनि खास महत्वको हुन्छ । खेलका दौरान केहि नयाँ किर्तिमान बन्छन भने केहि पुराना किर्तिमान तोडिन्छन पनी जुन हरेक खेलको सुन्दर पक्ष समेत हो
यी मध्ये पनि तर यहाँ सात यस्ता रेकर्डहरु रहेका छन जुन तोडिन लामो समय कुर्नु या भनौ असम्भव प्राय देखिन्छ । हो आज हामी अनलाईन खेलखबरको विश्वकप बिषेशमा सोही सामाग्रीलाई प्रस्तुत गरेका छौ ।
७. सर्वाधिक धेरै रन साथै सर्वाधिक सतक बनाउने खेलाडी : सचिन तेंडुलकर ( भारत )
क्रिकेट जगतका महान क्रिकेटर मध्यका एक संचिन तेंडुलकरका नाममा अनेकौ कीर्तिमानी रहेको छ । भारतीय तथा बिश्व क्रिकटमा सचिनको सफलता ठुलो रहेको छ । जसमा एउटा किर्तिमान मध्यमा विश्वकपमा सर्वाधिक रन बनाउने र धेरै अर्धसतक बनाउने किर्तिमान रहेको छ ।
विश्वकपका दौरान तेंडुलकरले ४४ आक्रामक पारि खेल्दै ५६.९५ औसत रनको धुवाधार ब्याटिङ्ग गर्दै २२७८ रन बनाएका थिए। एकदिवसीय विश्व कपमा ६ सतक बनाउदै अहिले सम्म विश्वकपमा सर्बाधिक धेरै सतक बनाउने किर्तिमान उनको नाममा रहेको छ ।
उनि सन् २००३ मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको विश्वकपमा उनी उत्कृष्ट खेलाडी समेत घोषित भएका थिए ।
भने टिमले सन् २०११ मा भारतमै भएको विश्वकपको उपाधि उचाल्ने क्रममा उनको योगदान पनी अतुललिय रहेको थियो । लामो समय क्रिकेटमा बिताएका सचिनलाई त्यो विश्वकप निकै महत्वपूर्ण रहेको थियो । टिमले दोस्रो पटक विश्वकपको ट्रफी उचालीरहदा उनले पनी आफ्नो सपना पुरा भएको महसुश गरेका थिए ।
६. एकदिवसीयको दुवै ६० र ५० ओवरमा जित्ने एक मात्र टिम भारत
अधिकांश क्रिकेट प्रेमीहरुलाई थाह नहुन सक्छ कि एकदिवसीयको दुवै ६० र ५० ओभरको संसकरणमा जित हात पार्ने एकमात्र देश भारत हो। सन १९८३ मा वेस्ट इंडीज विरुद्ध जित निकालेको थियो जतिबेला एकदिवसीय विश्वकप ६० ओवरको हुने गर्थो ।
तर हाल त्यो संरचना हटीसकेको अबस्थामा यो किर्तिमान भारतका लागी मात्र सिमित रहन गयो ।
सन् १९८७ पछि सम्पूर्ण एकदिवसीय संस्करण ५० ओवरमा परिणत भयो। भारतले सन् २०११ मा दोश्रो विश्व कप जित्दै पहीलो ६० र दोस्रो ५० ओवरमा जित निकाल्ने पहिलो र आखिरी देश बनेको हो।
५. लगातार बलहरुमा सर्बाधिक विकेट लिने खेलाडी एक मात्र लसिथ मलिंगा
लसिथ मलिंगा विश्व क्रिकेट चर्चित खेलाडी मध्यका एक खेलाडी हुन् । तिब्रगतिका बलर लसिथ मलिंगाको नाममा पनी विश्वकपमा एउटा सुन्दर किर्तिमान रहेको छ । सन २००७ मा वेस्ट ईण्डिजमा भएको खेलमा उनले दक्षिण अफ्रिका बिरुद्धको खेलमा लगातार ४ विकेट लिदै अनौठो रेकर्ड बनाएका थिए।
२०९ रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याउदै जवाफी ब्याटिंङ्ग गरेको दक्षिण अफ्रिका जितको दिशामा अगि बढिरहेको अबस्थामा मलिंगाले ईनिङ्गको ४५औ ओवरको अन्तिम २ बलमा र ४७ औ ओवरको पहिलो २ बलमा लगातार विकेट लिएका थिए ।
उनले पोलक, हॉल, कैलिस, र नतिनीको विकेट लिएका थिए । यो दुर्लभ किर्तिमान तोड्न असम्भव त होईन तर तोडन पक्कै गाह्रो हुनेछ ।
४. विश्वकपमा लगातार धेरै शतक बनाउने खेलाडी : कुमार संगकारा
श्रीलंकाका चर्चित तथा महान ब्याट्सम्यान कुमार संगकाराका लागी अघिल्लो सस्करणको विश्वकप खास रह्यो । अष्टेलिया र न्युजिल्याण्डले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सो विश्वकपका दौरान स्टाइलिस बायाँ हाते ब्याट्सम्यान संगकाराले केवल ७ म्याचमा लगातार ४ सतक प्रहार गरेका थिए । सो विश्वकपमा टिमले भने निराशाजनक प्रदशन गरेको थियो ।
उनले ७ पारी धुवादार ब्याटिंग गर्दै ५४१ रन बनाएका थिए। संगकाराले बंङ्गलादेश , इङ्गल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, र स्कटल्याण्ड विरुद्ध ४ लगातार म्याचमा ४ सतक बनाएका थिए। क्रिकेटमा सन्यास लिईसकेका संगकाराको नाममा यो बाहेक पनी अन्य थुप्रै रेकर्डहरु रहेका छन ।
३. विश्वकप जिताउने युवा कप्तान : कपिल देव
भारतलाई पहिलो पटक एतिहासिक सफलता दिलाउने क्रममा भारतीय कप्तान कपिल देवको भूमिका ठुलो रहेको छ । सन् १९८३ मा ईङ्गल्याण्डमा भएको तेस्रो सस्करणको विश्वकपमा भारतले फाईनमा वेस्ट ईण्डिजलाई ४३ रनले पराजित गर्दै पहिलो पटक उपाधि उचालेको थियो ।
विश्व क्रिकेटको ईतिहासमा सर्वश्रेष्ठ अल-राउन्डरको रूपमा प्रसिद्ध कपिलले युवा अबस्थामानै टिमको नेतृत्व गर्दै टिमलाई उपाधि दिलाएका थिए ।
२४ वर्षको उमेरमा कपिल देव पहिलो पटक भारतलाइ नेतृत्व गर्दै विश्व कप जिताएका थिए। यसैको साथ उनि विश्वकप जिताउने युवा कप्तान भएका हुन । यो किर्तिमान ३५ वर्ष देखि अटुट रहेको छ ।
अहिलेको विश्व कपमा रहेका १० देशका कप्तानको औसत उमेर २७ रहेको छ, त्यसैले आगामी ५ वर्ष सम्म अटुट रहनेमा दुइ मत भने पक्कै छैन।
२. विश्वकपमा धेरै पटक सहभागी जनाउने खेलाडी जावेद मियांदाद
क्रिकेट जानकारका अनुसार पाकिस्तानका जावेद मियांदाद उत्कृष्ट खेलाडिको सुचिमा पर्दछन । पूर्व पाकिस्तानी कप्तान जावेद मियांदाद उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानको रुपमा चिनिन्छन । उनले सन १९७५ देखि १९९६ सम्म २१ वर्षको सम्म गर्वका साथ पाकिस्तान क्रिकेटमा निरन्तर योगदान गरेका थिए ।
सन १९९२ को विश्वकपमा पाकिस्तानलाइ उपाधि उचाल्न महत्पूर्ण ४३७ रनको योगदान गरेका उनले १९९६ मा उनले आफ्नो छैठो र अन्तिम विश्व कप खेलेका थिए। निरन्तर ६ ओटा विश्वकप खेल्ने जावेद मियांदाद अहिले सम्म एक मात्र खेलाडि हुन ।
१. जितको लहर धेरै पटक उपाधि उचाल्ने मुलुक :अष्टेलिया
उपाधिको हकमा विश्व क्रिकेटको एक मात्र सफल र भाग्यमानि टिमका रुपमा अष्टेलिया एक हो । १२ औं सस्करण सम्म विश्वकप आईपुग्दा अष्टेलियाले ५ पटक उपाधी उचालीसकेको अबस्था छ । भने २ पटक उप बिजेता बनेको छ ।
सन् १९८७ मा भारत र पाकिस्तानमा भएको विश्वकपमा फाईनलमा ईङ्गल्याण्डलाई रोमाञ्चक खेलमा ७ रनले पराजित गर्दै पहिलो पटक विश्वकपको उपाधी उचालेको अष्टेलियाले यसपछि सन् १९९९ , २००२ र २००७ मा लगातार उपाधी आफ्नो नाममा लेखाउन सफल भयो ।
यसपछि अघिल्लो अष्टेलिया र न्युजिल्याण्डले सयुक्त रुपमा आयोजना गरेको विश्वकपमा अष्टेलियाले न्युजिल्याण्ड माथिनै ७ विकेटले जित हासील गर्दै उपाधि आफ्नो नाममा लेखाउन सफल भएको छ ।
Previous Postदिपेन्द्र र अमित चम्किदा पुलिसको लगातार दोस्रो जीत
Next Postरङ्गशाला निर्माणको सहयोगार्थ समर्थक बिच मैत्रिपूर्ण क्रिकेट खेल हुदैँ